मधुसुदनप्रसाद घिमिरे आइतवार, साउन २९, २०७४ 1632 पटक पढिएको
अपरा चार वर्षकी भइन् । अनुजा उनकी दिदी हुन् । उनी कक्षा ४ मा पढ्छिन् । घरका सबैजना बिहानै उठ्छन् । अपरा पनि आमासँगै उठ्छिन् । आमाचाहिँ कुचो बढार्न थाल्नुभयो । पिँढीको डिलमा अपरा थुचुक्क बस्छिन् । आमाले बढारेको हेरिरहन्छिन् । घर परिवारका सबै सदस्य आआफ्नो काममा लाग्छन् ।
अपराले कुचो समाउँछिन् । आमाले जस्तैगरी बढार्न थाल्छिन् । त्यो देखेर हजुरबाले भन्नुभयो, ‘नानी कुचो नबढार । सानो मान्छेले कुचो बढार्‍यो भने घरमा पाहुना आउँछन् रे ।’ हजुरबाको कुरा सुनेर अनुजाले भनिन्, ‘बढार नानी बढार, घरको काम जसले गरे पनि हुन्छ ।’ हजुरबाले केही बोल्नु भएन । अनुजाले हजुरबालाई फेरि भनिन्, ‘हामी नि..... हजुरबा हाम्रो स्कुलमा सफासुग्घर गर्ने, फूलबिरुवा रोप्ने गर्छैाँ ।’
हिजोमात्र कक्षामा एक पिरियड खाली भयो । नेपाली पढाउने सर बिरामी परेर कक्षामा आउनु भएन । त्यो खाली पिरियडमा हाम्रा समूहका साथीहरू बाहिर निस्केका थियौं । फूलबारीमा घाँस धेरै देख्यौं । हाम्रो समूहका साथीहरूले भने, ‘त्यो फूलबारीको घाँस उखेलौं ।’ सबैले हो मा हो मिलाए ।
फूलबारी सफा भइहाल्यो । खाली पिरियड सिद्धिइसकेकै थिएन । एकजनाले मात्र गरेको भए दिनभरिमा पनि त्यो घाँस उखेलेर सिद्धिने थिएन । सबैको प्रयासले थोरै समयमा धेरै काम भयो ।
अहिले आमाले कुचो बढारेको देखेर आमाको काम सघाउन मन लागेछ क्यारे सानी बहिनीले पनि कुचो बढार्न थालिन् । काम गरेको देखेर जान्ने त हो नि हजुरबा ।
हजुरबाले फेरि सोध्नुभयो, ‘तिमीहरूलाई यस्तो विचार कसरी आयो ? ’ अनुजाले जवाफ दिँदै भनिन्, ‘आजभोलि छ ... नि .... हजुरबा सामुदायिक संगठनहरू जताततै देखिएका छन् रे । हाम्रो सरले हामीलाई भन्नु भएको क्या .... । एकजनाले मात्र गरेर काम सफल हुँदैन । धेरैको प्रयास भयो भने ठूलो काम पनि थोरै समयमा राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिन्छ रे । हाम्रो स्कुलमा साथीसाथी मिलेर धेरैवटा संगठन बनाएका छौं । ती संगठनले विभिन्न सामुदायिक अभियान चलाएका छन् । कुनै समूहले सफाइ गर्ने, कुनै समूहले प्राथमिक उपचारका कुरा गर्ने । आफ्ना साथीहरूबीच केही पर्दा सहयोग गर्ने गरेका छौं । हाम्रो स्कुलको त्यो अभियान देखेर अहिले अरू स्कुलहरूले पनि त्यसै गर्न थालेका छन् रे ।’
हजुरबाले फेरि भन्नुभयो, ‘तिमीहरूले नयाँ काम पो गरेका रहेछौ त ।’ हजुरबाको उत्सुकता मेटाउँदै अनुजाले भनिन्, ‘यो काम नयाँ होइन रे हजुरबा । वनजंगलको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सामुदायिक वन, उपभोक्ता समिति, स्वास्थ्यका लागि सामुदायिक अस्पताल, सुरक्षाका लागि सामुदायिक प्रहरीहरू रहेको संस्था ठाउँठाउँमा रहँदै आएको धेरै समय भइसक्यो रे ।
उपचार, सरसफाइदेखि सबै काममा घरमा र सार्वजनिक स्थान जहाँ पनि धेरैको सहभागिता हुँदा काम गर्न सजिलो हुँदै गएको छ रे ।’उनले फेरि आफ्ना कुरा थप्दै भनिन्, ‘हाम्रो सरले त यस्ता धेरै कुरा हामीलाई सिकाइरहनु हुन्छ । अहिले आमाले कुचो बढारेको देखेर आमाको काम सघाउन मन लागेछ क्यारे सानी बहिनीले पनि कुचो बढार्न थालिन् । काम गरेको देखेर जान्ने त हो नि हजुरबा।’
आफ्नी सानी नातिनीको घतलाग्दा कुरा सुनेर हजुरबाको पनि आँखा खुल्यो । नातिनीको चलाखीपनको कदर गर्दै हजुरबाले भन्नुभयो, ‘तिमीले त निकै राम्रा कुरा पो सिकेकी रहिछ्यौ त । मेरी नातिनी कत्ति ज्ञानी । हजुरबाले अनुजालाई सुमसुम्याउँदै हर्षले मुसुक्क हाँस्नु भयो । त्यतिबेला अपरा पनि हजुरबाको काखमा आएर बसिसकेकी थिइन् ।
मानवअधिकार आयोगको नाममा अर्बौं गोलमाल 12042
प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? 11436
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै ९ हजार ५ सहिद 2406
लेखापरीक्षण नै गराउँदैन सरकारी निकाय : निगरानीमा पशुपति विकास कोष र पर्यटन बोर्ड 2599
गठबन्धन र सरकारका चुनौती 840
मालदिभ्सको राजनीतिक संकट 1108
लालबाबुको दोस्रो अवतार 2447
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 4032
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, नौ घाइते 193
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 3912
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 954
हुवावे नोभा टु आईमा ‘फेस अनलक’ र ‘एआर लेन्स’ 491
एनटीसीले प्रिपेड ग्राहकलाई सापटी दिने 7298
कुलमान घिसिङ बने मोबाइलमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने नेपाली 16680